ထူး ကဲ တဲ့ အရသာ – Hlataw.com
ဆန္ဒတွေ ပြင်းထန်လာ တဲ့ အေပရယ်က မောင်မောင့်အနမ်းကို ခပ်ကြမ်းကြမ်း တုံ့ပြန်လိုက်ရင်း မောင်မောင့်ဘောင်ဘီကြယ်သီးကို ဖြုတ်လိုက်တယ်။ ပြီးတော့ အောက်ကို ဆွဲချလိုက်တော့ အတွင်းခံထဲကနေ ထောင်ထနေတဲ့ မောင်မောင့်လိင်တံကြီးက နည်းနည်း လွတ်လပ်ရေး ရသွားလေရဲ့။ ဒီမှာပဲ မောင်မောင်က ခပ်တိုးတိုးညည်းလိုက်တယ်။
သူတို့နှစ်ဦးစလုံး အဝတ်မဲ့တဲ့ဘဝကို ပြောင်းလဲသွားဖို့ကတော့ အချိန်သိပ်မယူလိုက်ရပါဘူး။ ခဏနေတော့ သူတို့အဝတ်အစားတွေက မောင်မောင့်အိပ်ယာဘေးမှာ ပြန့်ကျဲလို့နေပြီ။ မောင်မောင်က အိပ်ယာပေါ် ခပ်လျောလျော မှီထားတယ်။ အေပရယ်က ဘေးကနေ လှမ်းခွရင်း မောင်မောင့်ကို ဖက်လုံးလို အသုံးပြု ထားတယ်။ အေပရယ့်နို့ကြီးတွေက မောင်မောင့်လိင်တံကြီးနဲ့ သိပ်မဝေးလှဘူး။ သူတို့လှုပ်လိုက်တော့ တစ်ချက်တစ်ချက် သွားထိနေတယ်။ အေပရယ်က မောင်မောင့်ကို စိုက်ကြည့်လိုက်ရင်း သူတို့နှစ်ယောက် တစ်ယောက်ရင်ထဲကို တစ်ယောက် လှမ်းမြင်လိုက်ကြရတယ်။
ရမ္မက်ဆန္ဒရဲ့ မီးတစ်စကတော့ သူတို့နှစ်ဦးကြား တောက်လောင်နေပြီ။ ဒါပေမယ့် စိတ်မပူပါနဲ့၊ ဒီမီးကို ဘယ်လိုငြှိမ်းသတ်ရမလဲ ဆိုတာကိုတော့ သူတို့နှစ်ယောက်စလုံး ကောင်းကောင်းသိကြပါတယ်လေ။ မောင်မောင်က အေပရယ်တစ်ယောက် သူ့ကိုယ်ပေါ် တဖြည်းဖြည်း ပွတ်ရင်းသပ်ရင်းတက်လာကို ကြည့်ကောင်းကောင်းနဲ့ ကြည့်နေမိတယ်။ အေပရယ်က မောင်မောင့်ဗိုက်တစ်လျှောက်နဲ့ ရင်ဘတ်ကို သူ့ရဲ့ ဖွံ့ ထွားလှတဲ့ ရင်သားတွေနဲ့ ပွတ်သပ်ရင်း အပေါ်ဘက်ကို တရွေ့ရွေ့ တက်လာတယ်။
နို့သီးခေါင်းချွန်ချွန်တွေက မောင်မောင့်ရင်ဘတ်ကနေ သူ့နှလုးံ သားထဲအထိ တိုး ဝင်နေကြသလိုပဲ။ အေပရယ်က အပေါ်တက်လာတော့ သူ့ပေါင်တွေကလည်း မောင်မောင့်ပေါင်ပေါ် ရောက်လာပြီပေါ့။ ဒီခဏမှာပဲ မောင်မောင်က စိုစွတ်စွတ်ခံစားမှုကို သိလိုက်ရတယ်။ အေပရယ့်အပေါ်ပိုင်းကရော အောက်ပိုင်းကရော သူတို့ရဲ့ ချစ်ပွဲအကြိုရလဒ်ကို သတိပေးနေကြပြီလေ။ မောင်မောင်ကတော့ အေပရယ့်ကိုပဲ စိတ်ဝင်တစားကြည့်နေမိတယ်။
ချစ်စိတ်တွေ ပြင်းပြနေတဲ့ အချစ်နတ်သမီးပျို တစ်ယောက်ကများ ဒီလိုမျိုး ပြုမူနေသလားလို့ ထင်ယောင်ထင်မှားဖြစ်မိတော့မလိုပဲ။ အေပရယ်က သူ့နှုတ်ခမ်းတွေကို မောင်မောင့်နှုတ်ခမ်းဆီကို ဖိကပ်လိုက်တော့ အလယ်ကနေ ဆုံချက်တစ်ခု ရှိနေတဲ့လား ကိုယ်ရဲ့ အပေါ်ပိုင်းက နှိမ့်ချလိုက်တာနဲ့အညီ အောက်ပိုင်းကလည်း တဖြည်းဖြည်း မြောက်တက်လာတော့တယ်။ နောက်ဆုံးတော့ အေပရယ့်လက်တွေက သူ့လိင်တံကြီးကို မြဲမြံစွာဆုပ်ကိုင်ရင်း အချစ်တို့ရဲ့ လမ်းအစကို ပို့ဆောင်လိုက်လေရဲ့။ သူ့ရဲ့ လိင်တံကြီးနဲ့ အေပရယ့်အဖုတ်လေးတို့ရဲ့ အစပေါ့။ မောင်မောင်ကတော့ ပြုံးကြည့်နေတုန်းပဲ။ အေပရယ် ဦးဆောင်လှုပ်ရှားတာကို အလိုက်သင့်နေရုံနဲ့ပဲ ခရီးဆက်လိုက်လို့လည်း ရတာပဲကို။ `အင်း …..´ အေပရယ်တစ်ယောက် သူ့အဖုတ်လေးထဲကို တိုး ဝင်လာတဲ့ မောင်မောင့်လိင်တံကြီးရဲ့ အစွမ်းသတ္တိကြောင့် ညည်းညူလိုက်ရတော့တယ်။
အား… ဟုတ်တယ်… အဲဒီလို… မောင်မောင်က အရင်းထိအောင် တိုးဝင်သွားတဲ့ သူ့လိင်တံကြီးနဲ့အတူ အသံထွက်ရင်း ကော့ပေးလိုက်တော့တယ်။ နှစ်ယောက်စလုံးကတော့ ရှေ့ဆက်ပြီး ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတာ တိုင်ပင်စရာမလိုပါဘူး။ အေပရယ်က တဖြည်းဖြည်းချင်း သူ့ရဲ့တင်ပါးကို ကြွလိုက်တော့ အတွင်းသားလေးတွေက မောင်မောင့်လိင်တံကြီးကို ခပ်တင်းတင်း ဆုပ်ညှစ်ရင်း လျောတိုက်ပြီးမှ လွှတ်ပေးလိုက်တယ်။
သူက မောင်မောင့်လိင်တံကြီးရဲ့ ထိပ်ဖျားကလေးပဲ ကျန်တဲ့အထိ ဆွဲထုတ်လိုက်ပြီး ခဏကြာအောင် ထိန်းထားရင်း မောင်မောင့်ကို ကျီစယ်လိုက်တယ်။ တကယ်တော့ ဒီလိုအနေအထားကို ပေါင်ကို ကားရင်း ထိန်းထားဖို့ဆိုတာက သူ့ကို လေ့ကျင့်ခန်း မှန်မှန်လုပ်တဲ့သူအတွက်ပဲ လွယ်တာလေ။ အေပရယ်က မောင်မောင့်ကို ပြုံးပြလိုက်ရင်း သူ့ရဲ့တင်ပါးကို တစ်ဖန်နှိမ့်ချလိုက်တယ်။ ပူနွေးစိုစွတ်တဲ့ ခံစားမှုက မောင်မောင့်ကို စိတ်ရိုင်းဝင်စေတယ်။ အေပရယ့်ထိုင်ထတွေ ကြမ်းလာတာနဲ့အမျှ မောင်မောင့်ရဲ့ အောက်က ပင့်ချက်တွေကလည်း ပြင်းထန်လာတယ်။
သူတို့နှစ်ဦးလုံးရဲ့ ညည်းသံတွေကလည်း တဖြည်းဖြည်းကျယ်လောင်လာလေရဲ့။ ဟား …. ကောင်းတယ် အေပရယ် … လုပ်စမ်းပါ …´မောင်မောင်က သူ့ရဲ့ သံချောင်းတမျှ မာကြောနေတဲ့လိင်တံကြီးပေါ် အေပရယ့်အဖုတ်လေးရဲ့ တင်းကျပ်တဲ့ ဆုပ်ညှစ်မှုတွေကို ခံယူရင်း လှုပ်ရှားမှုကို မြှင့်တင်လိုက်တယ်။ အေပရယ်ကလည်း မောင်မောင့်ပစ္စည်းပေါ် သူ့အဖုတ်လေးရဲ့ အတွင်းသားတွေကို လှုပ်ရှားပြီး သူ့အစိလေးက မောင်မောင့်ဆီးခုံကို ခပ်ပြင်းပြင်းသွားရိုက်မိတဲ့အထိ သူ့ကိုယ်လေးကို လှုပ်ရှားနေတယ်။
မောင်မောင်နဲ့ အေပရယ်တို့ ချစ်တမ်းကစားနေတုန်းမှာတော့ ဂျူလိုင်တစ်ယောက် နည်းနည်း စိတ်ငြိမ်စပြုလာပါပြီ။ အဲဒီတော့မှပဲ မောင်မောင် ပြောထားတာ သွားသတိရတယ်။ သူ့ဖီလင်နဲ့သူ မျောနေတော့ ညီမတစ်ယောက်လုံး နေမကောင်းဘူးဆိုတာကိုတောင် သတိမရတော့ဘူးလေ။ ဒါနဲ့ပဲ သူတို့အခန်းရှေ့က ဇွန်တို့အခန်းကို သွားကြည့်လိုက်တယ်။ တံခါးကို အသံမကြားအောင်ဖွင့်ရင်း ခြေသံမကြားအောင် နင်းရင်းနဲ့ အခန်းထဲဝင်သွားတဲ့ သူ့ရဲ့စိတ်ေစတနာက သူ့ကို လက်ငင်းပဲ အကျိုးပေးတော့တယ်။ သူဝင်လာတာကို ဇွန်ကတော့ မသိလိုက်ပါဘူး။ ဂျူလိုင်ကတော့ ဇွန့်မျက်နှာလေးပေါ်က ကျေနပ်နှစ်သိမ့်နေတဲ့ အမူအရာလေးကို သေချာမြင်တွေ့လိုက်ရတယ်။ ဇွန်က စောင်ပါးလေးအောက်က သူ့လက်တစ်ဖက်ကို သူ့အစိလေးဆီ လှမ်းလိုက်ရင်း `သိပ်ကောင်းတာပဲ မောင်မောင်ရယ် … လို့ အသံထွက်ညည်းလိုက်တယ်။
ကျန်တဲ့လက်တစ်ဖက်ကလည်း နို့လေးတွေကို ပွတ်သပ်ရင်းနဲ့ပေါ့။ `တကယ်လားဟင် … မောင်မောင်ကလေ … ဒီတော့မှ ဇွန့်မှာ အလန့်တကြားနဲ့ ထထိုင်လိုက်မိတော့တယ်။ ဒီမှာပဲ သူ့ကုတင်ဘေးကနေ ရပ်ကြည့်နေတဲ့ ဂျူလိုင့်ကို တွေ့လိုက်ရတယ်။ `ဂျူလိုင်… နင် ဘယ်တုန်းက ရောက်နေတာလဲ… ငါ… ငါ… ဘယ်သူမရှိဘူး ထင်လို့ … ဇွန်က ရှင်းပြဖို့ ကြံလိုက်တယ်။ ထားလိုက်ပါ … ကိစ္စမရှိဘူး..ဒါပေမယ့် ငါ တစ်ခုလောက် သိချင်တယ်.. မောင်မောင်က ဘယ်လိုနေလဲဟင် … ဇွန်က အိပ်ယာပေါ် ပြန်လှဲချလိုက်ရင်း အရိုးသားဆုံး အဖြေပေးလိုက်တယ်။
`မောင်မောင်လား … သူကလေ ငါ့အပေါ် သိပ်ကောင်းတာပဲ.. ငါ့ကို ဘာမှ အတင်းအကျပ် သူမလုပ်ပါဘူး.. အဲဒါ ငါ့အတွက်တော့ တကယ်က့ကို ခံစားရတယ် … ဇွန်က အိပ်မက်မူးရီ အတွေးပန်းချီခြယ်ရင်းနဲ့ ပြောလိုက်လေရဲ့။ ဒီတော့မှ ဂျူလိုင်လည်း လာရင်းကိစ္စကို မေးဖြစ်တော့တယ်။ `သြော် …. ဒါနဲ့ မောင်မောင်က ပြောတယ် … နင် နေမကောင်းဘူးတဲ့ …မဟုတ်ပါဘူး … သူနဲ့ တေဘယ်တင်းနစ်ရိုက်ရင်း ခြေထောက်နည်းနည်းနာသွားလို့ပါ … အခု ကောင်းသွားပါပြီ …အင်းလေ … ဒါဆိုလည်း ပြီးတာပဲ … ငါ သွားလိုက်ဦးမယ် … ဒီတစ်ခါတော့ ဂျူလိုင့်ရဲ့ ခြေလှမ်းတွေ ဦးတည်နေတာက မောင်မောင့်အခန်းဆီကိုပေါ့။
ဂျူလိုင်လည်း အပေါ်ထပ် မောင်မောင့်အခန်းရှေ့ ခြေချမိရော၊ အခန်းထဲကနေ မသဲမကွဲ အသံတွေ ကြားနေရတယ်။ ဂျူလိုင်က တံခါးကို ခပ်ဖြေးဖြေးတွန်းဖွင့်လိုက်တော့ အိုးကနဲ အားကနဲ အေပရယ့်အသံကျယ်ကျယ်က ဆီးကြိုပြီး နှုတ်ဆက်လိုက် လေရဲ့။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ မောင်မောင့်ရဲ့ လိင်တံကြီးက အေပရယ့်ထဲကို ခပ်နက်နက်တိုးဝင်သွားတာကိုး ။ ဂျူလိုင်တစ်ယောက် တံခါးရှေ့မှာ ပါးစပ်ကလေး အဟောင်းသားနဲ့ သူ့အစ်မနဲ့ မောင်မောင်တို့ရဲ့ ဖြစ်ပျက်နေပုံတွေကို ရပ်ကြည့် နေမိတယ်။ ဒါပေမယ့် ကာယကံရှင်နှစ်ဦးသားကတော့ သတိထားမိပုံမရပါဘူး။ ဒီလိုနဲ့ပဲ တခြားသူတွေ ကြားသွားမှာကို ဘေးကနေပဲ ဝင်စိတ်ပူပေးလိုက်ရတဲ့ ဂျူလိုင်က အခန်းထဲ ဝင်လိုက်ရင်း တံခါးကို အသံနည်းနည်းထွက်အောင် ပိတ်လိုက်တယ်။
ဒီတော့မှပဲ သူတို့နှစ်ဦးက လှည့်ကြည့်လိုက်ကြတယ်။ အေပရယ်ကတော့ မောင်မောင့်ပုခုံးပေါ်ကနေကျော်ပြီး အခန်းထဲ ဝင်လာတဲ့ ဂျူလိုင့်ကို ပြုံးပြလိုက်တယ်။ မောင်မောင်ကတော့ နည်းနည်း ဣနြေ္ဒမရမဖြစ်သွားပြီး ရှင်းပြဖို့ ကြိုးစားလေရဲ့။ အိုး … ဂျူ … ဂျူလိုင် … ဒါက … မောင်မောင်က အသံထွက်ရင်းနဲ့ သူ့အပေါ်က အေပရယ့်ကို တွန်းချဖို့ ကြိုးစားတယ်။ ဒါပေမယ့် အေပရယ်က ဘယ်ဖယ်ပေးမလဲ။ ကဲ … ဂျူလိုင်ရေ … ဘာပြောရမလဲဆိုရင်တော့ … မြင်တဲ့အတိုင်းပဲလို့ ပြောရတော့မှာပေါ့ဟယ် … အေပရယ်က ပြောရင်းဆိုရင်းနဲ့ အထက်အောက် လှုပ်ရှားပေးလိုက်တော့ မောင်မောင်လည်း နောက်ကို တဖြည်းဖြည်း ပြန်လန်ကျသွားတယ်။
ဒါနဲ့ … နင်တို့က နှစ်ယောက်တည်း ကစားတာလား … ဒါမှမဟုတ် တခြားသူများ ပါလို့ရသေးလား … ဂျူလိုင်က အေပရယ့်ကို ငယ်ငယ်တုန်းက ကလေးတွေ မေးသလို မေးလိုက်တော့ အေပရယ်က ခေါင်းတစ်ချက်ညိတ်ပြတယ်။ အဲဒီနောက်တော့ ကြမ်းပြင်ပေါ်က မောင်မောင်နဲ့ အေပရယ့် အဝတ်အစားတွေကြားထဲကို ဂျူလိုင်က သူ့အဝတ်အစားတွေနဲ့ အားဖြည့် ပေးလိုက်တယ်။ ပြီးတော့ ကိုယ့်အလုပ်ကိုယ်လုပ်နေကြတဲ့ နှစ်ယောက်အနားကို လျှောက်သွားလိုက်တယ်။
သူ့ရဲ့ ဆွဲဆောင်မှုအပြည့်နဲ့ ကိုယ်လေးကို လှုပ်ယမ်းရင်းနဲ့ပေါ့။ အနီးကပ်မြင်ကွင်းကနေ အေပရယ့်တင်ပါးတွေကြားက မောင်မောင့်ပစ္စည်းကြီး ဘယ်လိုဝင် ဘယ်လိုထွက်နေတာကို မြင်ရသလို သူတို့နှစ်ဦးရဲ့ အချစ်ရည်တွေ ကပ်ငြိနေတဲ့မြင်ကွင်းကလည်း ဂျူလိုင့်စိတ်တွေကို ပိုပြီးပြင်းထန်စေပါတယ်။ ဒီထက်ပို နီးနီးကပ်ကပ် တိုးသွားလိုက်တဲ့ အခါမှာတော့ သူတို့ရဲ့ အချစ်နံ့တွေကိုပါ ရလိုက်တယ်။ ဒီလိုအနံ့မျိုးဆိုတာက သိပ်တော့ ရှူချင်စရာ မကောင်းလှပါဘူး။ ဒါပေမယ့် လူသားတို့ရဲ့ သဘာဝခံစားမှုလို့ပဲ ပြောရမလား၊ ဒီအနံ့တွေက ဂျူလိုင့်ဆန္ဒတွေကို တွန်းအားပေးနေတယ်။
အေပရယ်က မောင်မောင့်ကိုယ်ပေါ်မှာပဲ တစ်ပတ်လှည့်လိုက်တော့ မောင်မောင်တစ်ယောက် ဖျင်းဖျင်းဖျင်းဖျင်းဖြစ်အောင် ကောင်းသွား ပေမယ့် အေပရယ်ကတော့ သူ့ကို ဂရုမစိုက်ဘဲ အနားရောက်လာတဲ့ ဂျူလိုင့်ကို လက်ကမ်းလိုက်ပါတယ်။ ဂျူလိုင်ကလည်း အေပရယ့်ဦးဆောင်မှုနောက်ကိုလိုက်ရင်း သူ့မျက်နှာကို အေပရယ့်မျက်နှာတည့်တည့်ဆီ ဦးတည်လိုက်တယ်။
အေပရယ်က နှုတ်ခမ်းချင်း မတွေ့ခင်ကတည်းက လျှာလေးကို တစ်လစ်ထုတ်ထားတာမို့ ဂျူလိုင်ကလည်း အလိုက်သင့်ပဲ သူ့နှုတ်ခမ်းလေးကို ဟပြီး အေပရယ့်လျှာ ဝင်ရောက်ကျူးကျော်ဖို့ ခွင့်ပြုလိုက်တာပေါ့။ အေပရယ့် နှိုးဆွမှုတွေအောက်မှာ ဂျူလိုင်တစ်ယောက် ပျော်မွေ့လာပါပြီ။ အေပရယ့်လက်တွေက သူ့နို့တွေပေါ် ရောက်လာတဲ့အခါ မှာတော့ ဂျူလိုင့်မျက်လုံးလေးတွေ မှေးစင်းသွားတယ်။ ဂျူလိုင်ကလည်း တခြားညီအစ်မတွေလိုပဲ မခေပါဘူး။ အေပရယ်နဲ့ယှဉ်လိုက်ရင် သူမသာ ကိုယ်မသာလောက်ကို နို့ကြီးတဲ့စာရင်းထဲ ပါပါတယ်။ အေပရယ်က ဂျူလိုင့်ကို တဖြည်းဖြည်း လက်တွဲခေါ်ပါတယ်။
နှုတ်ခမ်းချင်း လျှာချင်းစုပ်နမ်းနေသလိုပဲ အောက်က လက်တွေကလည်း ဂျူလိုင့်နို့သီးခေါင်းလေးတွေကို လက်ညှိုးလက်မနဲ့ ဖျစ်ညှစ်ပေးလိုက်တယ်။ အစ်မပီပီသသပါပဲ။ ဂျူလိုင့်ကို ဂရုတစိုက် တွဲခေါ်နေပေမယ့် မောင်မောင့်ကိုလည်း မေ့မထားပါဘူး။ သူ့တင်ပါးတွေကို မြှောက်လိုက် ကြွလိုက်လုပ်ပေးနေပမယ့် ဂျူလိုင့်ဆီမှာလည်း အာရုံဝင်စားနေရသေးတော့ လှုပ်ရှားမှုတွေက သိပ်တော့ မပြင်းထန်လှပါဘူး။ မောင်မောင်က ဒါမျိုးတော့ ခွင့်လွှတ်တတ်ပါတယ်။ သူ့နားက မိန်းကလေးနှစ်ယောက် နမ်းနေကြတာကို ကြည့်ရင်းနဲ့ပဲ စိတ်ဖြေနိုင်ပါတယ်လေ။ သူကြည့်နေရင်းနဲ့ အေပရယ့် နက်မှောင်တဲ့ ဆံပင်တွေနဲ့ ဂျူလိုင့်ဆံပင်နီဖျော့ဖျော့တွေက ရောယှက်သွားကြတယ်။
သူတို့နှစ်ဦးရဲ့ ဆန္ဒတွေနဲ့ ပြည့်နှက်နေတဲ့မျက်နှာလေးတွေကို ဆံပင်တွေက ဘောင်ခတ်ထားတော့ ကြည့်နေရတဲ့ မောင်မောင့်အဖို့ ထူးခြားတဲ့မြင်ကွင်းတစ်ခု ဖြစ်နေလေရဲ့။ အဲဒီနောက်တော့ အေပရယ်က နှုတ်ခမ်းချင်းခွာလိုက်ပြီး သူ့လက်တွေကိုလည်း ဂျူလိုင့်ကိုယ်ပေါ်ကနေ ရုပ်သိမ်းလိုက်တယ်။ ပြီးတော့ မောင်မောင့်ကို တစ်ချက်လည်ပြန်ကြည့်လိုက်ပြီး ဂျူလိုင့်ကို အပြုံးလေးနဲ့ ပြောလိုက်တယ်။
ဟဲ့ ဂျူလိုင် … နင် ဒီကို ရပ်ကြည့်ဖို့လာတာတော့ မဟုတ်ဘူးမလား … လို့ ပြောရင်း မောင်မောင့်ပေါ်ကနေ ထလိုက်ရင်း သူ့ညီမ အနားမှာ ရပ်လိုက်တယ်။ ပြီးမှ ခပ်တိုးတိုးနဲ့ `ကဲ … ဒီညတော့ နင့်လက်ထဲ အပ်လမ်ကိုယ်´ လို့ ပြောလိုက်တယ်။ ဂျူလိုင်က မိုးပေါ်ကို ချိန်ရွယ်ထားတဲ့ မောင်မောင့်ဒုံးပျံကြီးကို လှမ်းကြည့်လိုက်တယ်။
အေပရယ့်အရည်တွေနဲ့ ပြောင်လက်နေပြီး သူ့ရဲ့ နှလုံးခုန်သံနဲ့အတူ တုန်ခါနေသလိုပဲ။ ဂျူလိုင်တစ်ယောက် စိတ်ညှို့ခံထားရသလို စိုက်ကြည့်နေမိတုန်းမှာပဲ အေပရယ့်လက်တွေက သူ့နောက်ကျောပေါ် ရောက်လာတာကို သတိပြုလိုက်မိတယ်။ အဲဒီအချိန်မှာပဲ အေပရယ့်လက်တွေက ဂျူလိုင့်ကို ကုတင်ပေါ် အသာအယာ တွန်းပို့လိုက်လေရဲ့။ ဂျူလိုင်ကလည်း အလိုက်သင့်ပဲ ကုတင်ပေါ်တက်လိုက်ရင်း ချွေးတွေစို့နေတဲ့ မောင်မောင့်ကို ပြုံးပြလိုက်တယ်။
တစ်ခါတည်းပဲ သူတို့နှစ်ဦး အလုပ်ဖြစ်မယ့်အနေအထားကို ရောက်သွားပေမယ့် တကယ် စတင်လိုကမ်ကိုတော့ သူ့ဘက်က မဝံ့မရဲဖြစ်နေတာမို့ အေပရယ်ကပဲ မောင်မောင့်လိင်တံကြီးကို ကိုင်လိုက်ပြီး ဂျူလိုင့်ကျောလေးကို သပ်ပေးလိုက်တော့ သူလည်း အားတင်းပြီး မောင်မောင့်လိင်တံကြီးနဲ့ သူ့အဖုတ်လေးကို မိတ်ဆက်ပေးလိုက်ပါတော့တယ်။
သူတို့ရဲ့ပစ္စည်းချင်း စတင်ထိတွေ့လိုက်တော့ ဂျူလိုင်က နှုတ်ခမ်းလေးကို ကိုက်လို့ အားတင်းရင်း သူ့အဖုတ်လေးအဝကနေ မောင်မောင့် လိင်တံကြီး အတွင်းထဲအထိဝင်ရောက်ဖို့ တဖြည်းဖြည်းချင်း ကြိုးစားလိုက်တယ်။ မောင်မောင့်လိင်တံကြီးက ဂျူလိုင်ရဲ့အချစ်တံခါးကို တဖြည်းဖြည်း တွန်းဖွင့်လိုက်တယ်။ မရင်းနှီးတဲ့အရာတစ်ခုကို ကြိုဆိုလိုက်ရတဲ့ ဂျူလိုင်ကတော့ အင့်ကနဲ ညည်းလိုက်တယ်။ အေပရယ်ကတော့ ဘေးကနေပဲ ဂျူလိုင်နဲ့ မျက်လုံးချင်းဆုံအောင်ကြည့်ရင်း အားပေးသလို ပြုံးပြလိုက်တယ်။
ဒီတော့မှပဲ ဂျူလိုင်လည်း အံကြိတ်ရင်း သူ့အတွင်းသားလေးတွေဆီကို မောင်မောင့်လိင်တံကြီး အပြည့်အဝ တိုးဝင်လာအောင် ခွင့်ပြုပေး လိုက်တော့တာပါပဲ။ ဒီအရသာကတော့ ဘာနဲ့မှာ သူ့အဖို့ လဲနိုင်မယ် မထင်ပါဘူး။ သူ့ရဲ့ ပထမဆုံးရည်စားနဲ့ လွန်ခဲ့သောနှစ်များစွာက ဖြစ်ခဲ့တဲ့ သူ့အပျိုစင်အတွေ့အကြုံလေးကလည်း ဒီလောက်ဘယ်ကောင်းမလဲလေ။ ဂျူလိုင်က သူ့ရဲ့တင်ပါးတွေနဲ့ မောင်မောင့်ဆီးခုံတို့ ထိကပ်သွားတဲ့အထိ ဖိချလိုက်တယ်။ ခုတော့ မောင်မောင့်လိင်တံကြီးရဲ့ အရသာကို ပြည့်ပြည့်ဝ၀ ခံစားလိုက်ရပြီပေါ့။
ကဲ… ဒီအချိန်မှာတော့ စပြီး နှစ်သက်စရာတွေ တွေ့ကြုံဖို့အချိန်ပေါ့လေ။ အေပရယ်က ဂျူလိုင့်ပါးလေးကို နမ်း၊ ပုခုံးလေးကို ပွတ်ပေးလိုက်တော့မှ ဂျူလိုင်လည်း သတိဝင်လာပြီး အေပရယ်လုပ်ခဲ့သလိုမျိုး သူ့ကိုယ်လေးကို မောင်မောင့်အပေါ်မှာ နှိမ့်လိုက်မြှင့်လိုက်လုပ်ပါတော့တယ်။ ဂျူလိုင့်မှာတော့ အတွေ့အကြုံသိပ်မများခဲ့ပေမယ့် သဘာဝက ပေးလိုက်တဲ့အစွမ်း တွေကပဲ သူ့ကို ဦးဆောင်နေတာပါ။ မောင်မောင့်လို ဆွဲဆောင်မှု အပြည့်ရှိတဲ့ ကောင်လေးတစ်ယောက်ကို ပိုင်ဆိုင်လိုက်ပြီလို့ ခံစားလိုက်ရတဲ့ အရသာက သူ့ကို တဖြည်းဖြည်း ကျွမ်းကျင်လာစေပါတယ်။
အေပရယ်ကတော့ သူတို့နှစ်ဦးကို ကျေနပ်နှစ်သိမ့်စွာ ကြည့်နေလေရဲ့။ ခုန်ပေါက်လှုပ်ရှားနေတဲ့ ဂျူလိုင့်ရင်သားတွေ၊ မျက်နှာရှေ့ကို ဝဲကျသွားလိုက်၊ နောက်တစ်ခါ လှုပ်ရှားချိန်မှာ နောက်ဘက်ကို ပြန်ရောက်သွားလိုက်ဖြစ်နေတဲ့ ဂျူလိုင့်ဆံပင်တွေ၊ ပြီးတော့ လှုပ်ရှားမှုတွေကြားက ကြားနေရတဲ့ မောင်မောင်နဲ့ ဂျူလိုင်တို့ရဲ့ ညည်းသံတွေ ဒါတွေက ဘေးမှာ ရပ်ကြည့်နေတဲ့ အေပရယ့်စိတ်ကို ထိန်းချုပ်မရအောင် ဖြစ်သွားစေတယ်။ ဒီတိုင်း မနေနိုင်တော့တဲ့ အေပရယ်ကလည်း ပါဝင်ပတ်သက်လိုက်ပါတယ်။ ဂျူလိုင့်မျက်နှာကို သူ့ဘက်ဆွဲလှည့်လိုက်ရင်း နှုတ်ခမ်းလေးတွေကို သူ့ရဲ့နှုတ်ခမ်းနဲ့ ဖိကပ်လိုက်တော့ ဂျူလိုင်ကလည်း ပြန်ပြီးတုံ့ပြန်လာပါတယ်။ နှုတ်ခမ်းလေးကို ဟလိုက်ပြီး လျှာလေးကို ထုတ်ရင်း အေပရယ့်ပါးစပ်လေးထဲကို ပြန်လည် တိုက်စစ်ဆင်လိုက်လေရဲ့။
ဒါပေမယ့် မောင်မောင့်အပေါ်မှာ လှုပ်ရှားနေတဲ့အရှိန်ကိုတော့ ဘယ်လိုမှ အပျက်မခံပါဘူး။ ဒီတော့ ဘေးရောက်နေသလို ခံစားရတဲ့ အေပရယ်ကလည်း အားကျမခံပါပဲ မောင်မောင့်ရင်ဘတ်ပေါ် တက်ခွလိုက်ပြီး သူ့ညီမနဲ့ မျက်နှာချင်းဆိုင်လိုက်တယ်။ ခပ်တင်းတင်း ဖက်လိုက်တော့ သူတို့ရဲ့ နို့တွေက တစ်ဦးကိုတစ်ဦး နူးညံ့စွာ၊ နွေးထွေးစွာ ပွတ်တိုက်လိုက်ကြတယ်။ နို့သီးခေါင်းလေတွေကလည်း ထောင်ထနေလေတော့ အချင်းချင်းထိလိုက်တဲ့ခဏမှာ သူတို့နှစ်ဦးစလုံးကို ပြီးသွားစေနိုင်လောက်တဲ့ အရသာမျိုးကို ပေးစွမ်းနေလေရဲ့။ ဂျူလိုင်တစ်ယောက် မောင်မောင့်အပေါ်ကနေ ခပ်ကြမ်းကြမ်းလှုပ်ရှားလိုက်ရင်း အော်ညည်းသံတွေ ထွက်လာသလို အေပရယ်ကလည်း တဆတ်ဆတ်တုန်ရင်း အထွဋ်အထိပ်ကို ရောက်ရှိသွားပါတော့တယ်။
ဂျူလိုင့်အတွက်တော့ ဒီလိုပြီးသွားတာ မဆန်းပေမယ့် အေပရယ့်မှာတော့ အထိအတွေ့၊ အနမ်းတွေလောက်နဲ့ ပြီးသွားတာကတော့ ဆန်းကြယ်သော စိတ်လှုပ်ရှားမှုကြောင့်လို့ပဲ ဆိုရမယ် ထင်ပါတယ်။ သူတို့မိန်းကလေးနှစ်ယောက် တစ်ဦးကိုတစ်ဦး တင်းတင်းကျပ်ကျပ် ဖက်ထားရင်း ငြိမသ်က်နေကြတယ်။ သူတို့တွေရဲ့ အော်သံတွေကို တစ်ယောက်ယောက်များ ကြားသွားမလားလို့ စိတ်ပူတဲ့ ပုံစံလည်း မရှိပါဘူး။ အရာအားလုံးထဲမှာ သူတို့သတိထားလိုက်မိတာကတော့ သူတိုတွေ အခု ခံစားနေရဲ့ အရသာပဲပေါ့။ နောက်တော့ ဂျူလိုင်က အရင်စပြီး လက်တွေကို ဖြေလျှော့ပေးလိုက်ပါတယ်။
သူ့လက်တွေကို မောင်မောင့်ပေါင်ကြားမှာ နောက်ပြန် ထောက်လိုက်ပြီး နောက်ကို အနည်းငယ် လျှောချလိုက်တယ်။ ဒီတော့ သူ့ရင်ကို အေပရယ့်ရှေ့ ကော့ပေးလိုက်သလို ဖြစ်သွားတာပေါ့။ အေပရယ်တော့ ဖိတ်ကြားမှုကို လက်ခံလိုက်သလိုပါပဲ၊ ဂျူလိုင့်ရဲ့ ဘယ်ဘက်နို့ပေါ်ကို မျက်နှာအပ်လိုက်ပြီး နို့သီးခေါင်းလေးကို စုပ်ယူလိုက်တယ်။ ပြီးတော့လည်း ခပ်ဖွဖွလေး ကိုက်လိုက်သေးတယ်။
နာလောက်အောင် မပြင်းထန်ဘူး၊ ဒါပေမယ့် ခပ်ဖျင်းဖျင်း ဖြစ်သွားတဲ့ အရသာကိုတော့ ဂျူလိုင်တစ်ယောက် နှစ်နှစ်ခြိုက်ခြိုက်ကြီး ခံစားလိုက်ရတာပေါ့။ ဂျူလိုင်က အားကနဲ အော်လိုက်ရင်း သူ့အစ်မရဲ့မျက်နှာကို ဒီနေရာကနေ ဘယ်မှရွေ့မသွားရအောင် ထိန်းကိုင်ထားလိုက်တယ်။ သူတို့တွေ အပေါ်မှာ အလုပ်များနေတုန်း အောက်ကနေ မောင်မောင်ကလည်း အေပရယ်ေ့ ကျာကို ပွတ်ပေးလိုက်ရင်း နို့တွေဆီကိုလည်း လက်လှမ်းလိုက်တယ်။ ဒီအချိန်မှာပဲ ပုံမှန်ပြန်ဖြစ်သွားတဲ့ ဂျူလိုင်က မောင်မောင့်လိင်တံကြီးကို စတင်ပြုစုပါတော့တယ်။
မောင်မောင်ကတော့ မိန်းကလေးနှစ်ဦး ပြီးသွားပေမယ့် သူ့မှာ ခရီးဆုံးမရောက်သေးလို့ ပိုပြီးတောင် တင်းမာဖောင်းကားလာတယ်။ ဂျူလိုင်တစ်ယောက်မှာတော့ အဲဒီလိုကြီးထွားလာတဲ့ မောင်မောင့်ပစ္စည်းကို သူ့အတွင်းထဲမှာ မနည်းလှုပ်ရှားနေရပါတယ်။ အေပရယ်ကလည်း သူ့အဖုတ်လေးကို မောင်မောင့်ရင်ဘတ်ပေါ် ပွတ်လိုက်တော့ အရည်တချို့က မောင်မောင့်ဗိုက်ပေါ်အထိ စီးကျလာလေရဲ့။ အေပရယ်ကလည်း တက်ညီလက်ညီ ပါဝင်ဖို့အတွက် သူ့အဖုတ်လေးကို မောင်မောင့်မျက်နှာနားအထိ တိုးကပ်ပေးလိုက်တယ်။
ဂျူလိုင့်ဆောင့်ချက်တွေ အောက်မှာ မောင်မောင်လည်း အရသာတွေ့လာပါပြီ။ နှာခေါင်းကလည်း မျက်နှာနားက အေပရယ့်အဖုတ်လေးရဲ့ အနံ့ကို မလွန်ဆန်နိုင်တော့တဲ့အတွက် အေပရယ့်ပေါင်လုံးလေးတွေကို သူ့လက်တွေနဲ့ သိုင်းဖက်လိုက်ရင်း သူ့မျက်နှာပေါ်ကို ဆွဲယူလိုက်တယ်။ လျှာကို တတ်နိုင်သမျှ ထိုးသွင်းလိုက်ရင်း အေပရယ့် အတွင်းသားလေးတွေကို လျက်ပေးလိုက်တော့ မတူညီသောအရသာတွေက မောင်မောင့်ကို ရောက်ရှိသွားစေဖို့အတွက် တွန်းအားပေးနေကြပါပြီ။ နောက်ဆုံးတော့ မောင်မောင်လည်း ဆက်မထိန်းထားနိုင်တော့ဘဲ အေပရယ့်ကို တအားဖိလျက်ရင်း ပါးစပ်ကလည်း ဗလုံးဗထွေးနဲ့ ပြောလိုက်တယ်။
အား… ငါ… ငါ… ပြီးတော့မယ် ထင်တယ်… ဟင်း…ဂျူလိုင်ကလည်း မောင်မောင့်အပေါ်ကနေ သူ့ရဲ့လမ်းကို သူဖောက်နေတယ်။ လှုပ်ခါလာတဲ့ ကိုယ်လုံးလေးရဲ့အတွင်းမှာတော့ မောင်မောင့်လိင်တံကြီးက ပေးစွမ်းတဲ့အရသာကို တင်းကျပ်စွာ ခံစားနေရပါတယ်။ နောက်ဆုံးမှာတော့ မောင်မောင့်ရဲ့ ပန်းထုတ်လိုက်တဲ့ အရည်တွေက ဂျူလိုင့်အဖုတ်လေးထဲကို လာရောက်ထိမှန်တဲ့ အခါမှာ သူ့တစ်ကိုယ်လုံး တွန့်လိမ်ရင်းပြီးသွားသလို အလျက်ခံနေရတဲ့ အေပရယ်ကလည်း စိတ်လှုပ်ရှားစွာနဲ့ ပြီးသွားပါတော့တယ်။ ဂျူလိုင်တစ်ယောက် ဘေးကို လဲကျသွားတဲ့အခါမှာတော့ အေပရယ်က မောင်မောင့်ရဲ့ တဖြည်းဖြည်း ပျော့လာတဲ့ လိင်တံကြီးကို စုပ်ယူလိုက်ပြီး သူတို့သုံးဦးစလုံးရဲ့ ပေါင်းစပ်ထားတဲ့အရသာကို ခံစားနေမိတယ်။
ထူးခြားတဲ့အရသာပါပဲ၊ ချိုတယ်၊ ငန်တယ်၊ အရသာရှိတယ်ပေါ့။ အားလုံးပြောင်စင်အောင် သန့်ရှင်းပေးပြီးမှ အေပရယ်က မောင်မောင့်ဘေးကနေ ထရပ်လိုက်တယ်။ ပြီးတော့မှ မောင်မောင့်ဘေးကို ဝင်လှဲလိုက်တဲ့ ဂျူလိုင့်ကို ပြုံးကြည့်ရင်း ပြောလိုက်တယ်။ နင်တို့နှစ်ယောက် ခဏနားလိုက်ကြဦးလေ … ငါတော့ အောက်ဆင်းပြီး နည်းနည်းကြည့်ပြောထားလိုက်မယ် ဒီနေ့ ပင်ပန်းကြတယ် မဟုတ်လား …လို့ ပြောပြီး သူ့ရဲ့ အဝတ်အစားတွေကို ရှာနေလေရဲ့။ နောက်ဆုံးတော့ အေပရယ့်ကိုယ်ပေါ် အဝတ်အစားတွေ ရောက်သွားကြပါပြီ။ သူတို့နှစ်ဦးကို တစ်ချက်နှုတ်ဆက်သလို ကြည်လိုက်ရင်း အခန်းထဲကနေ ထွက်သွားတယ်။ အနမ်းလေးတစ်ချက်ကို လေထဲလွှင့်လိုက်ရင်းနဲ့ပေါ့။ သူ့အတွေးထဲမှာတော့ ဒီအတိုင်းဆို ပိုပြီးစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းလာပြီလို့ တွေးရင်း အောက်ကို ဆင်းသွားပါတော့တယ်။